1. Kedu ihe bụ Sermorelin Acetate?
3. Uru nke iwere Sermorelin Acetate
4. Kedu ka anyị ga esi eji Serertlin Acetate?
5. Kedu mgbe anyị nwere ike ịhụ nsonaazụ Sermorelin Acetate?
6. Sermorelin acetate mmetụta dị na ya
7. Ebe kacha mma ịzụta Sermorelin Acetate
Acertate Sermorelin bụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-ahazi yiri nke na-emepụta hormone na-ahapụ hormone (GHRH).
A maara acetate Sermorelin maka ikike ọ nwere iji kpalie gọọmenti na-emepụta ka ọ na-emepụta ma na-ezochi homonụ.
Sermorelin Acetate (86168-78-7) bụ usoro ihe peptide nke hormone synthetic synthetic synthesis nke mejupụtara 29 amino acids. FDA kwadoro ọgwụ a maka ọgwụgwọ ụmụaka, ma ọtụtụ ndị na-ahụ maka ọgwụ na ụwa na-eji ọgwụ Sermorelin Acetate kwalite ịba ụba nke hormone na ndị okenye.
N'adịghị ka mgbakwunye HGH ndị ọzọ, a na-eji Serterlin Acetate mee ihe. N'aka nke ọzọ, ụgwọ Sermorelin dịkwa obere ma e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị yiri ya. A na-ahọrọ ọgwụ a iji mee ihe n'abalị ma a ghaghị iwere ọ dịkarịa ala ọkara otu awa tupu ma ọ bụ mgbe o risịrị nri. Iwere Serertlin Acetate n'abalị na-eme ka mmelite zuru oke nke ahụ gị na-eto eto nke hormone nke na-eto eto nakwa dị ka ịme ka gọọmenti gbụrụ gị na-ehi ụra n'oche ụra. N'aka nke ọzọ, Sermorelin acetate dị n'ụdị abụọ, nke bụ Oral Sermorelin nkwadebe na ụdị nke injectable nke mebiri emebi.
Ọrụ Sermorelin site n'ịkpalite mmepụta nke homonụ nke na-eto eto na ahụ ma na-akasị nyere ụmụ na-enweghi hormone aka. Ọ bụ ezie na a kwadoro ọgwụ ahụ iji mee ihe na ụmụaka, ndị dọkịta achọpụtala na Sermorelin dị oke mkpa ma baa uru mgbe a gwara ndị okenye. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị okenye Na-alụ ọgụ na Sermorelin ebe ndị ọzọ nwere obi ụtọ na Sermorelin na ọnwụ. Ọgwụ ọjọọ na - eme ka mmiri gwọọ pitesitary na - emepụta ọtụtụ homonụ na ahụ gị.
GHRH bụ peptide nke nwere 29% amino acid nke nọ na hormones. Ndị amino acid a bụ ndị kasị dị irè na GHRH. N'ozuzu, dị ka ndị ọgbọ, hormones homoni zoro ezo site na pituitary glass deplete na ihe ka ọtụtụ n'ime nnyocha ndị ọkachamara ahụike dị iche iche mere ka ọ pụta ìhè na Sermorelin nwere ike iweghachi ogo homone dị na ahụ gị ruo na nwata site na ịwelite IGF-1 ( 1 nke na-eme ka insulin na-amasịkarị.
Otú ọ dị, ụzọ kachasị mma isi nweta uru acetate Serertlin bụ iji ọgwụgwọ ziri ezi ma soro usoro ntụziaka nke dọkịta gị. Ịkwụsị ọgwụ ọjọọ nwere ike iduga mmetụta ndị na-enweghị ike imebi ma ọ bụ ọbụna isiokwu ị ga-eme ọganihu ọnọdụ ahụ ike. Ndabere ga-agọnahụ gị ohere ịnweta uru nke acetate Sermorelin. Dịka ị nwere ike ịnweta ọgwụ si na ntanetị ntanetị ma ọ bụ site na ụlọ ọgwụ, adịghị amalite ịṅụ ọgwụ na-enweghị nyocha ahụike.
Ọ bụ ezie na Sermorelin na-efu dị ala karịa ọgwụ ndị yiri ya na ahịa, ọ na-enye nsonaazụ nti. E nwere dị iche Ihe esi na Sermorelin acetate ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrịa na-ewere ya n'ụzọ ziri ezi ma soro ntuziaka dọkịta ahụ. Otu n'ime uru bara uru nke iji ọgwụ a eme bụ na ị nwere ike ịhọrọ ụdị usoro ọgwụgwọ nke dị gị mma. Enwere ọnụọgụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịjịghị afọ ojuju na injections ma ị nwekwara ike ịga maka usoro ọgwụgwọ injectable, ma ihe ndị ahụ yiri ya. Nyocha Sermorelin Acetate bụkwa ebe kachasị mma iji lelee uru ndị ọrụ ụfọdụ na-enwe obi ụtọ mgbe ha nụsịrị ọgwụ a. Enwere uru ndị ọzọ dị mkpa ị ga - enwe mmasị maka ịṅụ ọgwụ a, ha gụnyere:
★ Sermorelin acetate maka ịlụ ọgụ maka nsogbu nke ịka nká
A na-ewerekwa ọgwụ a dị ka otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị elu na nká na ahịa ebe ọ na-enyere aka n'ịkwalite anụ ahụ na mkpụrụ ndụ ndị mebiri emebi n'ime ahụ gị. Nke a na-eme ka akpụkpọ ahụ gị dị mma nakwa na-eto eto, si otú ahụ belata mmetụta ndị meworo agadi dị ka ezigbo mma na akpụkpọ ahụ na nkwonkwo na-adịghị ike. Ọdịdị dị elu nke hormone na-eme ka ọ gbanwee n'ọdịdị gị, a makwaara ya dị ka isi ihe kpatara droopy ma ọ bụ akpụkpọ anụ na wrinkles. Ọtụtụ n'ime Sermorelin Nyocha acetate egosi na ọtụtụ ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-enwe obi ụtọ na nsonaazụ ya karịa ka ọ na-ekpochapụ ihe ịrịba ama ndị merela agadi.
N'ụwa nile, ọtụtụ nde mmadụ Na-alụ ọgụ na Sermorelin na nsonaazụ ya dị oke mma. Sermorelin na-eweghachite arụ ọrụ nke ahụ gị site na idozi nsogbu niile kpatara HGH. Ngwá ọgwụ na-ebido nzaghachi anụ ahụ na usoro nchebe nke na-anabata oke ọkwa HGH dị elu na-enyere ndị ọrụ aka ka mma ha lee anya ma belata ihe ịrịba ama agadi.
★ Acredate Sermorelin Maka Efu Ọla
Ọmụmụ ihe dị iche iche nke ndị ọkà mmụta dị iche iche mere ka ha doo anya na ndị toro eto na-ekwusi ike site na oke ibu na akwalata nwere ike inwe ogo homonụ karịa ndị nwere ahụ ike. N'ezie, ọtụtụ ndị na-ahọrọ Sermorelin na arọ ọnwụ usoro iji dozie ịdị arọ ha. E gosipụtara acetate Sermorelin na ọ bụ ọgwụ kwesịrị ekwesị iji nyere ndị mmadụ aka buru oke ibu site na mkpali nke mmepụta hormone na ahụ. A na-ejikọta ọgwụ ahụ na mmụba nke homonụ nke na-eto eto na ahụ, nke na-eme ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ na oke ahụ na-emepụta yana ịbelata abụba anụ ahụ. Maka ama ndi ozo, jiri aka gi ma obu onye dibia.
★ Uru ndị ọzọ nke Sermorelin Acetate
E nwekwara uru ndị ọzọ ị ga-enweta maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ a n'ụzọ ziri ezi, ha bụ ndị a;
Mmiri nke Ịnweta Mma; Ihe ọmụmụ Sermorelin egosila na enweghị HGH na ndị okenye na-eduga ná Mbelata ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ, nke na-eme ka ohere ịnweta ahụhụ site na osteoporosis. Takuru Sermorelin maka ihe dị ka ọnwa 12 ma ọ bụ karịa nwere ike ime ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ gị dịkwuo mma ma belata ohere ọganihu nke osteoporosis.
Enwe Ike Ike; N'ihi mgbanwe ndị ọgwụ a na-eme n'ime ahụ gị, na iji mee ka mmepụta hormone na-eto eto, nke na-eduga n'ịzụ ụlọ ahụ, ọ na-emekwa ka ahụ ike dịkwuo elu. Ị ga - enweta nsonaazụ dị mma mgbe ịṅụ ọgwụ maka ọnwa 12.
Mee ka enwere onwe gi ike: ndi mmadu nwere oke ogwu nke homone na-enwekarị nsogbu na libido n'ihi obere ume ike. Ọtụtụ n'ime ndị toro eto bụ ndị jiri Seretin acetate emeela ka ha nwekwuo mmelite na ịbịakwunye ha na ịchọta ngwọta nke ejaculation.
Mee ka akpụkpọ ahụ dị mma; mbelata akpụkpọ anụ akpụkpọ na nsonaazụ dị oke site na ogo ogo hormone na ahụ gị. N'ụzọ dị nro, Sermorelin Acetate bụ ọgwụ kasị mma iji dozie nsogbu akpụkpọ anụ a niile.
Metabolism; Mkpụrụ nke hormone na-eto eto n'ime usoro ahụ gị na - eduga ná ntakịrị izu ike, na Sermorelin Acetate ọgwụ nwere ike ime ka ọnọdụ a gbanwee. Usoro HCGH na-arụkwa ọrụ dị mkpa n'inweta njikọ protein, normalize carbohydrate metabolism, ma mee ka ọkpụkpụ abụba dị mma nakwa dị ka mbenata cholesterol ọjọọ. Mmetụta metabolism iji meziwanye ọkwa HCG na-eme ka ahụike na mmepụta ahụ dị mma.
Ụfọdụ n'ime uru ndị ọzọ Sermorelin Acetate na-agụnye gụnyere; enwekwu ntachi obi, nkwonkwo ahụ na-eme ka ahụ dịkwuo mma, mmeri dị mma na-agwọ ọrịa, na-egbochi ọrịa na nkwonkwo obi, na ụra dị mma.
Iji ọgwụ ọ bụla eme ihe karịa otú ahụ Sersterlin Acetate kwesịrị ịduzi ma duzie gị dọkịta mgbe ị nyochachara ahụike. Mgbe ufodu, usoro onu ogugu nke edere n'elu akwukwo nwere ike ibu karia ma oburu na agbanye onodu nke ichoro. N'ihi ya, ọgwụgwọ gị kwesịrị ịtọ usoro ọgwụgwọ na usoro dị mma iji rụpụta ihe kacha mma. Usoro onodi na-adabere na ihe ịchọrọ iji nweta ihe atụ Ọ bụ ihe na-eme ka ọ dị njọ usoro ọgwụgwọ nwere ike dị iche na ọgụ aging na Sermorelin dose. Gbalịa hụ na ị na-agbaso ntụziaka niile nke dibịa gị ma bulie ya nchegbu gị tupu gị amalite iji ọgwụ Serertlin Acetate.
A na - emekarị Sermerlin Acetate site na ọgwụ ogwu n'ụlọ gị, ụlọ ọrụ dọkịta, maọbụ na ụlọ ọgwụ kacha nso. N'aka nke ọzọ, ọgwụ gị nwere ike ịzụ gị ka ị ga-esi banye onwe gị onwe gị n'ụlọ kama ịnọ na nleta ụlọ ọgwụ maka usoro ọgwụgwọ. Otú ọ dị, mgbe injecting dosin, jide n'aka na ị na-agbaso usoro ogwu ahụ n'ụzọ ziri ezi dị ka ndị ọgwụ na-akụzi. Igbubiga ihe ókè ma ọ bụ ọbụna na-ekwesịghị ekwesị injections nwere ike iduga na mmetụta dị egwu, nke bụghị ihe ị na-atụ anya mgbe na-ewere Sermorelin Acetate. Ọzọkwa, cheta ichebara ihe ndị a mgbe ị na-aṅụ ọgwụ;
Lelee ma ọ bụrụ na achọgharịrị Serertlin Acetate ma ọ bụ na ọ nwere ụfọdụ ihe, ma ọ bụrụ na ọ bụ ya emela ya. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na abaa iko ma ọ bụ gbawara, kwụpụkwa ọgwụ ahụ ma gwa dọkịta gị ozugbo maka nduzi.
Ekwela ka acetate Sermorelin mebie ya mgbe ị na-agwakọta ya.
Na-ekwenye mgbe niile na ị gbanye Serertlin acetate mgbe agwakọta. Ọ dịkwa mma na ị ga-atụfu ọgwụ a na-ejighị n'aka.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe mgbakwunye hormone ọ bụla ọzọ, ị ga-akwụsị ịnweta ya ọ dịkarịa ala otu izu tupu ịmalite iji ntinye ọgwụ Serertlin acetate. Zoo ajụjụ gị ma ọ bụ nchegbu gị na ndị na-agwọ gị ma ọ bụ ndị na-enye ọgwụ na ọgwụ ma gwa ya / ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru ọgwụ maka otu ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ọzọ. Nke a ga - eme ka ọ dị mfe maka dọkịta gị inye ndụmọdụ dị mma ebe ọ bụ na ọgwụ ụfọdụ nwere ike igbochi ọrụ Sermorelin na ahụ gị.
Mgbe niile, jide n'aka na ị na-edebe ọgwụ ahụ, na-esite na ụmụaka rute ma pụọ ​​na anu ulo gị. Ejila ogbugba ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị na-eji na-elekọta ya Sermorelin dosage. Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ otú ị si achụpụ ngwaahịa ahụ mgbe ojiji. Gwa onye dọkịta gị, ka ọ gwa gị ndụmọdụ gbasara iwu kachasị mma na mpaghara maka mkpochapu ọgwụ ngwaahịa na mpaghara gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla Sermorelin Acetate dosage, jide n'aka na ị na-ewere ya n'ime oge kachasị dị anya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọta oge mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka usoro onyonyo ọzọ, ị nwere ike ịzụta ụbụrụ a na-atụghị anya ma gaa na nke ọzọ. Ejila okpukpu abụọ iji chefuo onye ahụ a gbajuru ebe ọ bụ na nke ahụ ga-eme ka ọ daa mbà ma nwee ike iduga ọganihu. Ị nwekwara ike ịgwa dọkịta gị ka o nye gị ndụmọdụ dịka ị ga-achọpụta na ị funahụ usoro ọgwụgwọ gị.
Tụkwasị na nke a, maka Sermorelin na Ụda ọnwụ, ọ ga-abụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị na-eso usoro ọgwụgwọ na nri kwesịrị ekwesị na mgbatị.
(1) Kedu ụdị nke Serertlin Acetate dị?
Ọgwụ a dị n'ụdị abụọ bụ isi, nke gụnyere ịṅụ ọgwụ na nkwadebe Oral, ma ha abụọ na-ebute nsonaazụ yiri ya. Ụdị ahụ gụnyere;
♦ Ụdị injectable nke ime mmụọ - Nke a bụ ụdị nke Sermorelin Acetate nke pụtara na ọ ga-enye ya naanị site na injections. Ị nwere ike ịgbanye onwe gị ma ọ bụ mee nleta oge niile na ebe obibi ọgwụ gị iji nye usoro ọgwụgwọ ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, dọkịta gị ga-azụ gị na ị ga-esi banye n'ụlọ ebe ọ bụ na ị ga-eji ọgwụ ọjọọ maka ọnwa 12 ma ọ bụ karịa.
♦ Oral preparations Nke a bu uzo Sermorelin Oral, nke putara ebe a agaghi eme ka ihe nwute nke injections. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọgwụgwọ kachasị mma maka gị, dabere na ihe ị na-enwe. Ọ bụrụ na adịghị mma na injections, ị nwere ike ịrịọ dọkịta gị mgbe ọ bụla ka ọ kọwaa ya. Cheta, ị gaghị enwe ike iji ọgwụ ọnụ na ọgwụ onjectable mee n'otu oge ahụ.
(2) Tupu ojiji; kedu ihe ị chọrọ ịma?
Ịkwesiri ịkpachapụ anya mgbe ị na-ebute ọgwụ mgbochi a-na-ahapụ ndị ọgwụ n'ihi na ọ bụrụ na ejighị ya n'ụzọ ziri ezi nwere ike iduga na nsogbu ndị siri ike. Echela Sermorelin Acetate site na ụlọ ọgwụ ma ọ bụ na ntanetị ịntanetị ma malite iji ya na-enweghị ndụmọdụ ndụmọdụ gị. Cheta, ozu mmadụ dị iche iche na ọ bụ nanị na ọgwụ a na-arụ ọrụ maka enyi gị, ọ bụghị akpaka na ọ ga-aga nke ọma gị. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji dị mma ka ị nyochaa ahụike ma kwekwa ka ọkachamara ahụike gị setịpụrụ gị usoro ọgwụgwọ ziri ezi. Gwa dọkịta gị, ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru ọgwụ ọ bụla ọzọ ebe ọ bụ na ọgwụ ụfọdụ agaghị arụ ọrụ nke ọma na Sermorelin Acetate. Ụfọdụ n'ime ọnọdụ ahụike ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwere ha gụnyere;
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịtụrụ ime ma ọ bụ na ị dịlarị ime ma ọ bụ ọbụlagodi na ị bụ nwa ara. Nke a ga - enyere dọkịta gị aka ịmepụta usoro kachasị mma iji hụ na ọgwụ adịghị emetụta nwa ebu n'afọ ma ọ bụ nwa.
Ọ bụrụ na ị na-ewere ọgwụ ọ bụla na-abụghị ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ndenye ọgwụ, mgbakwunye nri, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eji nkwadebe ọgwụ. Ụfọdụ ọgwụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na Sermorelin acetate, ọ dịkwa mma ịkọrọ gị ọgwụ tupu ịmalite ịṅụ ọgwụ ma ọ bụ usoro okwu ọnụ.
Ọ bụrụ na ụfọdụ ihe oriri, ọgwụ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-enye gị nsogbu.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ụbụrụ ma ọ bụ isi merụrụ ahụ na ọrịa ndị ị na-agwọ ọrịa ma ọ bụ na i nweghachila mgbe ụfọdụ.
Ụfọdụ ọgwụ ọjọọ nwere ike imekọrịta nke ọma na Sermorelin acetate, ebe ndị ọzọ nwere ike ịdọrọ uru nke ọgwụ ahụ. Ya mere, dị ka e kwuru na mbụ, ọ dị mma ịkọrọ dọkịta gị ụdị ọgwụ ọ bụla ị na-ewere iji nye gị ndụmọdụ. Ụfọdụ ọgwụ nwere ike ịkwado na ị gụchaa ọgwụ ndị ị na-eme ugbu a na-amalite na-ewere Serertlin Acetate maọbụ ọ bụrụ na ọ nweghị mmetụta na ị nwere ike ịṅụ ọgwụ abụọ n'otu oge. Ekwula oge ịgwa ndị na-ahụ maka ahụike gị ma ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ ndị na-esonụ;
Ndị na-egbochi cyclooxygenase, dị ka indomethacin na aspirin, glucocorticoids dị ka prednisone, Insulin, ma ọ bụ ọgwụ ndị nwere ike belata ahụrụ gị dị ka Propylthiouracil. Ndị ọzọ na-agụnye ọgwụ ndị na-agụnye somatostatin nke na-ahapụ somatostatin dị ka levodopa, na clonidine ebe ọ bụ na ha belata ọrụ ike Sermorelin ma ghara ịnwe ike Ihe esi na Sermorelin acetate ọbụna mgbe ọ gụsịrị ọgwụ ruo ogologo oge.
Ndepụta ọgwụ ndị nwere ike imetụta Serertlin acetate ike ịrụ ọrụ n'ime ahụ gị dị ogologo, ọ bụkwa ya mere ọ dị mkpa mgbe niile ịkọrọ dọkịta gị ọgwụ ọ bụla ị na-ewere maka nsonaazụ kacha mma. Mgbe ụfọdụ, ọbụna ọgwụ ndị ị na-eche adịghị emetụta, dịka ọgwụ ọgwụgwọ nwere ike ịkpata nsogbu ndị siri ike. Echela ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta nhụpụta kachasị mma na kachasị. Iji nọrọ jụụ nakwa jide n'aka na ị gụnyere dọkịta gị n'ime usoro ọgwụgwọ niile. Nnyocha ahụike na-arụ ọrụ dị mkpa tupu, n'oge na mgbe ọ gwụchara usoro ọgwụgwọ.
Tụkwasị na nke a, dọkịta gị nwere ike ịme nyocha ọhụụ iji nyochaa ogo hormone na-eto eto, mmetụta ndị ọzọ, na ọganihu ọgwụgwọ. Jide n'aka na ị na-asọpụrụ ndị niile dọkịta gị na-ahọrọ maka uru Sermorelin Acetate kacha mma. Maka ụmụ nwanyị, ọ bụrụ na ị chọpụta na ị dị ime mgbe ị na-agwọ ọrịa, gwa ya ọgwụ ozugbo. Ọ bụ ezie na, ọ gaghị edozi ihe ọgwụ nwere ike ime nwa gị ma ọ bụ nwa ebu n'afọ, ọ gaghị adị mma ịnọgide na-ewere Serertlin Acetate mgbe ị na-enye nwa ara ma ọ bụ ime ime. Otú ọ dị, ọ bụ mgbe ị nyochachara ahụike mgbe dọkịta gị nwere ike ịduzi gị. Ejila na-ewere usoro ọgwụgwọ mgbe ị nọ n'ọnọdụ a n'amaghị gị ọgwụ.
Ma HGH na IGF na-ezobe ya mgbe niile ma ọ bụghị mgbe niile. Ya mere, ule na nyocha nke ọbara agaghị ezu iji chọpụta ma ọ bụrụ na Sermorelin acetate amalitela ọrụ ma ọ bụ. Otutu n'ime ndị dọkịta na-ede ọgwụ Sermorelin Acetate ma ọ bụ ọgwụ ndị yiri ya na-enyocha irè nke ọgwụ ndị ahụ site na mgbaàmà, nke bụ nchọpụta nke mgbaàmà iji nyochaa uru ọgwụ, ọdịdị ahụ, na nyocha ọbara.
Ị ga-amalite inwe ọganihu Sermorelin acetate mgbe ịmalitere ịmalite ịdị mma ma na-ehi ụra mgbe ihe dị ka izu asaa n'iwe gị ọgwụ. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịchọta ngwa ngwa nke ndị nwere nsogbu n'inweta ụra dị mma. A ga-enwewanye ume ike ahụ, a ga-enwekwu obi gị.
Ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọrịa na-amalite ịkọ mgbanwe dị ukwuu n'ahụ ahụ mgbe atọ ruo ọnwa isii nke ọgwụ Serertlin Acetate karịsịa na Sermorelin na arọ ọnwụ. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị a kacha ahụ anya nke mmụba ahụ na-eto eto na-eto eto na-agụnye ịmepụta ahụ ike na-eme ka ahụ ike na ahụike zuru oke. Ndị okenye na-alụ ọgụ na Sermorelin ha nwere ike ịmalite na-enweta nsonaazụ n'ime ọnwa 3 mbụ.
Maka nsonaazụ kachasị mma, ịkwesịrị ịbanye Sermorelin mgbe nile ebe ọ na-ewepụ ya na ngwa ngwa gị. Usoro ọgwụ na-eme ihe na-adabere n'ụdị nke mmeghachi omume na usoro ndu gị nke na-eduga n'ịmalite mmepụta nke homonụ. Ọzọkwa, dabere na usoro ahụ gị, ị nwere ike ịmalite ịhụ nsonaazụ Serertlin Acetate mgbe ọnwa 3 ma ọ bụ 6 ebe ọ na-ewe oge maka uto hormone na-arụ ọrụ ma na-ebute nsonaazụ ndị achọrọ.
Enweghị oge doro anya na a ga - ewere Sermorelin Acetate, mana ị ga-ebelata ma ọ bụ ịkwụsị ịṅụ ọgwụ mgbe ị natachara hormone nke ọma. Ọ bụ ya mere nyocha ụlọ nyocha mgbe niile dị mkpa iji nyochaa ọkwa hormone. Dọkịta gị ga-abụ onye ziri ezi iji belata ma ọ bụ nye ndụmọdụ ka ị kwụsị ịṅụ ọgwụ gị mgbe ị nyochachara ahụike. Ụfọdụ ndị ọrịa na-eburu Serertlin Acetate maka ọnwa 12 ma ọ bụ karịa tupu ha enweta oke ogo homone.
Ọtụtụ n'ime ọgwụ ndị a na-ere ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile enwere mmetụta ụfọdụ nke nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ ọbụna dị njọ ma ọ bụrụ na ejighị ọgwụ ahụ n'ụzọ ziri ezi. Na-ele Sermorelin Acetate anya na ụfọdụ ndị ọrụ na-akọ ụfọdụ ihe mgbaàmà nke mmetụta ndị dị na ya. Otú ọ dị, ndị ọrịa na-agbaso ntụziaka usoro ọgwụgwọ, ma na-enyocha ule mgbe nile, na-akọ mmetụta dị njọ nke Sermorelin Acetate.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ị na-akọ akụkọ ọ bụla ị ga - enwe n'ọdịnihu mgbe ị na - ewere ọgwụ a na - ewuli elu ọgwụ. Ozi ọma ahụ bụ na dọkịta gị nwere ike inyere gị aka ịchịkwa mmetụta ndị dị na Sermorelin Acetate ma ọ bụrụ na ị gwa ya n'oge. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ọzọ na-emetụta gị nke ị nwere ike ịnweta mgbe ị na-ewere ọgwụ gị;
Isi ọwụwa na mgbe ụfọdụ, uto dị ịtụnanya n'ọnụ gị.
Mgbu, ntụpọ, ọzịza, ma ọ bụ ọbara ọbara gburugburu ebe ogwu ahụ.
na Nyocha Sermorelin Acetate ụfọdụ ndị ọrụ gosipụtara nkwenye ha na ahụmahụ ọjọọ ha nwere ọgwụ ọjọọ nke dị mma ma ọ bụrụ na ị gaghị agbaso usoro ntụziaka. Mmetụta dị obere na-apụ n'anya n'oge, ma ọ bụrụ na ha anọ ogologo oge karịa ka gị na dọkịta kwurịta okwu ga-enyere gị aka inweta ngwọta tupu ọnọdụ ahụ amalite. Otú ọ dị, enwere mmetụta ndị ọzọ siri ike na mgbe ọ bụla i nwetara ha, ị ga-akpọ ọgwụ ozugbo ebe ọ bụ na ha nwere ike iduga nnukwu ahụ ike. Mmetụta ndị a gụnyere;
Mmeghachi omume nhụsiri ike dịka mkpuchi, ọkụ ọkụ, nsogbu iku ume, ikpuchi obi, ọkpụkpụ ihu, egbugbere ọnụ, ọnụ, ma ọ bụ ire gị.
Ndị a abụghị ihe niile na-emetụta Serertlin Acetate na-atụ anya ka ụfọdụ n'ime ha dabere na onye na-aṅụ ọgwụ ahụ. O nwere ike ịbụ ezigbo ihe ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ihe ọ bụla dị iche iche mgbe ị na-eji ọgwụ gị. Otú ọ dị, ụzọ kachasị mma iji chebe onwe gị pụọ na mmetụta ndị a bụ ịrapagidesi ike na ntụziaka nke usoro ọgwụgwọ yana ịkwanyere nyocha nile nke dọkịta gị nyocha maka nyocha. Ịnagide nsogbu bụkwa isi ihe kpatara nke ọtụtụ n'ime mmetụta ndị metụtara Ozizi Achon. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ na i nwekwuo ọgwụgwọ karịa ka a gwara gị, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ gaa nleta ahụ ike kacha nso maka enyemaka.
Nanị ụzọ ị ga-esi nweta nsonaazụ kasị mma nke Sermorelin acetate bụ iji jide n'aka na ị zụrụ ya n'aka onye ahịa a pụrụ ịdabere na ya. Ma ọ dị mkpa ka gị na Sermorelin na-alụ ọgụ ma ọ bụ na-achịkwa ahụ gị, ọgwụ dị elu na-eme ka ị nweta oke ma ọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na i soro ntuziaka usoro. E nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa Sermorelin n'ahịa, ma ịnweta ihe ziri ezi adịghị mfe ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya. Dọkịta gị nwere ike ịbụ onye kachasị mma iji nyere gị aka ịzụta Sermorelin Acetate.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịchọ ndị kacha ere ere ahịa online, mana jide n'aka na ị zụta Sermorelin Acetate site na onye nrụpụta kachasị nwee obi ike ma ọ bụ ma ọ bụ Serpentlin soplaya. Emela ka ịzụta ọgwụ sitere na ụlọ ahịa ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ onye na-ere ahịa n'Ịntanet ka ị na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ ebe ọ bụ na ụfọdụ nwere mmasị na-eme uru ma ghara inwe ụdị Sermorelin kasị mma nke na-eme ka nsonaazụ dị mma.
Tupu ịzụta Sermorelin Acetate, lelee anya ndị ahịa na-ere ahịa iji nyere gị aka ịme mkpebi. Ugbu a, anyị bụ ndị na-ere ahịa na Sermerlin Acetate kasị mma na mpaghara ahụ. Anyị na-emepụta oge, n'ụwa na anyị Sermorelin efu dị ala ma tụnyere nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ahịa. Naanị ị ga-etinye iwu gị site na smartphone gị, kọmputa ma ọ bụ mbadamba, anyị ga-anapụta ngwaahịa gị n'ime oge kachasị dị anya. Umu oku anyi na-emeghe 24 / 7 mgbe niile, anyi nwere ike ijide n'aka inweta enyemaka ngwa ngwa site na ndi oru aka ahia anyi mgbe obula i kpotoro anyi. Ọzọkwa, gaa na nyochaa Sermorelin Acetate na ị ga-achọpụta na ihe ka ukwuu n'ime ndị ahịa anyị nwere afọ ojuju maka ngwaahịa anyị.
Anyị na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ mgbe niile ịzụta Sermorelin Acetate na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ghara iji ya na-enweghị nyocha ahụike. Naanị dọkịta kwesịrị ịtọzi usoro ọgwụgwọ maka ọnọdụ gị ma nyere gị aka ịchịkwa mmetụta ọ bụla nwere ike ịmalite mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe dịka Sermorelin Acetate. Zuru ajụjụ gị ma ọ bụ nchegbu gị na onye na-ahụ maka ahụike gị tupu ịmalite iji ngwaahịa anyị mee ka ị nwee ike inweta ọtụtụ uru Sermorelin Acetate.
Janvier, S., Cheyns, K., Canfyn, M., Goscinny, S., De Spiegeleer, B., Vanhee, C., & Deconinck, E. (2018). Ebube na-emerụ emerụ nke kachasị ugboro ugboro zutere ọgwụ polypeptide na-ere ahịa na Belgium. Na-akọ, 188, 795-807.
Weber, C., Krug, O., Kamber, M., & Thevis, M. (2017). Ihe omimi na nkowa nke ichoputa ihe ndi doping na ejiri na Switzerland. Ihe na-eji na - eme ihe, 52(6), 742-753.
Makimura, H., Feldpausch, MN, Stanley, TL, Sun, N., & Grinspoon, SK (2012). A na-ejikọta obere ihe na-emepụta ihe na-eme ka mmiri ozuzo buru ibu na oke ibu na LDL na nke HDL. Clinical endocrinology, 76(2), 220-227.